Beytel Waa Maxay?
Qaybta Farshaxanka Mareykanka
Kelmedda Beytel waa kelmed Cibraani ah micneheeduna waa ‘Guriga Ilaah.’ (Bilowgii 28:17, 19) Waa magac ku istaahil ah dhismooyinka Markhaatiyaasha Yehowah oo lagu taageero laguna hoggaamiyo hawsha wacdiga. Guddiga Maammulka waxay ka adeegaan xarunta maammulka dunida ee dalka New York Mareykanka. Halkaas bay ka maammulaan hawlaha laamaha waddammada kale. Dadka meelahan ka adeega dhammaantooda waxaa loo yaqaannaa reerka Beytel. Sidii reer oo kale bay iyagii oo midnimo ka dhexeyso u wada nool yihiin, u wada shaqeeyaan, cunto isla cunaan Kitaabkana u wada bartaan.—Sabuurradii 133:1.
Waa meel gaar ah oo mid walba oo reerka ku jira noloshiisa Ilaahay ugu adeego. Beytel walba waxaa jooga niman iyo naago Kirishtaan ah oo waqti buuxo u goʼay inay doonista Ilaahay sameeyaan oona Boqortooyadiisa taageeraan. (Matayos 6:33) Midna lama mushaaro laakiin waxaa lagu kaalmeeyaa qol iyo cunto iyo lacag yar oo waxay u baahan yihiin ku gataan. Qof walba oo Beytel jooga hawl buu qabtaa ha noqoto hawl xafiiseed, jiko, buug samays, guri safayn ama dhar dhaqid. Kuwana waxay ka shaqeeyaan qolka cuntada, madbacadda, dayactirka ama waxyaalo kale.
Waa meel mashquul lagu yahay taageeridda wacdiga Boqortooyada. Hawsha wacdiga warka wanaagsan waa hawsha ugu muhimsan. (Markos 13:10) Sidaa daraaddeed in dadka oo dhan la ogeysiiyo runta Kitaabka Quduuska ah waa hadafka ugu weyn uu Beytel walba leeyahay. Buuggan samayskiisa baa tan muujiyo. Qoriddiisa Guddiga Maammulka baa masʼuul ka ahaa. Kaddibna boqolaal kooxood oo luqadaha turjumo baa kombiyuutarka loogu gudbiyay. Markaana waxaa lagu daabacay dhowr Beytel oo leh madbacado xawlli sare ku shaqeynaya. Dabadeedna 110,000 oo kiniisadood in ka badan baa loo diray. Reer Beytel qayb walba oo hawshan muhimka ah si laga maarmin bay u taageeraan.
Yaa Beytel ka adeego sideena kuwaas loo daryeelaa?
Hawshee muhimka ah buu Beytel walba taageeraa?
Wadaag Wadaag Beytel Waa Maxay?